Wasiirro Xadhigga ka jaray Dugsiga Agoomaha Burco oo ay Hirgelisay Hay'adda African Relief Committee | Dhamays Media Group
Burco (Dhamays)- Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland oo ay weheliyaan masuuliyiin kale, ayaa xadhigga ka jaray Dugsiga Agoomaha ee gobolka Togdheer, kaas oo ay Burco ka dhistay Hay’adda African Relief Committee.
Hay’adda African relief committee, oo ah Hay’ad ka shaqaysa waxbarashada, taakulaynta iyo daryeelidda Carruurta Agoomaha ah, ayaa Dugsigan ka hirgelisay magaalada Burco, waxaanu isugu jiraa Dugsigaasi oo Boodhan ahi jiif, cunto iyo waxbarasho.
Waxaana ka qaybgalay Munaasibadda lagu furay Dugsigaas Madaxda Hay’adda, Madax-dhaqameed iyo Masuuliyiin dowladda Somaliland ka tirsan oo Wasiirro ka mid yihiin, waxaanay dhammaan xubnaha halkaas ka hadlay u mahad-naqeen Hay’adda African Relief Committee oo ay maalgeliso dowladda Kuwaite.
Ugu horreyn Cabdiraxmaan al-Macallimu oo ah Madaxa Xafiiska Hay’adda African Relief Committee ee Somaliland, ayaa ka warbixiyey Dugsigaas oo uu sheegay inay u diyaariyeen qaab dhammaystiran, isla markaana ku habboon deegaan waxbarasho. Waxaanu tilmaamay inay Hay’ad ahaan Somaliland ka hirgeliyeen xarumo kala duwan oo waxbarasho oo ay ka faa’iidaystaan ubad badan oo Agoon ah, isla markaana ay sii wadi doonaan adeegyadooda waxbarasho iyo taakulaynta kala duwan ee ay Somaliland ka fuliyaan.
Suldaan Axmed Maxamed Colhaye (Abu-Salmaan), oo ka mid ahaa xubnaha xafladdaas Dugsiga lagu furay ka qaybgalay, ayaa ammaanay Hay’adda Kuwaydiga, waxaanu yidhi; “Hay’addan African Relief Committee ee Kuwait, waa hay’ad qiimo weyn ku leh Somaliland, waxay ka soo aasaasantay caasimadda, waxay u soo fidday gobollada, waxaynu joognaa gobolka Togdheer oo ay Dugsigan qiimaha leh oo aynu filayno inay ka sii ballaadhiso.”
La-taliyaha Madaxweynaha Somaliland ee arrimaha Bulshada Cabdiwaaxid Cabdiqaadir, oo isna xafladdaas ka hadlay, ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin oo soo dhawaynayaan adeegyada Hay’addani ka fuliso Somaliland. “Waa wax aad iyo aad loogu baahnaa, Hay’addu hawsha ballaadhan ee ay dalka ka waddo Bari iyo Galbeed-ba waan uga mahad-naqaynaa. Xarunta ay Hargeysa ka dhistay Hay’addu ee quruxda badan ee waxbarashada, beerta iyo qalabaynta tahayba, runtii door weyn bay ka qaadatay farsamada iyo bilicda-ba,” ayuu yidhi La-taliyaha Madaxweynaha ee arrimaha Bulshadu.
Sidoo kale, Wasiirka Xidhiidhka Golayaasha iyo Dastuurka Somaliland Maxamed Xaaji Aadan, ayaa halkaas ka hadlay, waxaanu yidhi; “Hindisaha iyo hannaanka dowladda ayey tahay in la horumariyo waxbarashada, caafimaadka, farsamada gacanta iyo dhammaan waxyaabaha mustaqbalka ubadkeennu ku hagaagayo.”
Waxa uu Wasiirka Dastuurka oo hadalkiisa sii watay intaas ku daray; “Waxa Hay’addu wax ka tartay Boorama, Hargeysa iyo gobollo kale. Markii la xaqiijiyey waxtarka ay leedahay Hay’addu, waxa la go’aansaday oo Madaxweynuhu uu Masuuliyiinta heer Qaran ee Kuwayd iyo kuwa halkan innala jooga intaba isugu yeedhay in Hay’adda dalka oo dhan lagu ballaadhiyo.” Sidaa ayuu yidhi Wasiirka Dastuurku.
Gebo-gabadii Wasiirka Waxbarashada iyo Sayniska Axmed Maxamed Diiriye (Toorno) oo Dugsigaas furay, ayaa halkaas ka hadlay, waxaanu u mahad-celiyey Hay’adda Kuwait foundation oo uu tilmaamay inay barnaamijyo muhiim ah oo waxbarasho u badan Somaliland ka fulisay.
“Ardayda waxaan ugu bushaaraynayaa waad aragtaan dhulka la idiin dhisaye, waa inaynu marka koowaad Allaah ugu mahad-naqnaa. Marka labaad waxaan Ardayda iyo Waalidkaba u sheegayaa, inaynu ka faa’iidaysanno oo aynu dhawrno hantida Badda ka soo gudubtay ee halkan la innoogu keenay oo aynu ilaashanno.” Sidaa ayuu yidhi Wasiirka Waxbarashada Somaliland.
Hay’adda African Relief Committee, oo ah Hay’ad ka shaqaysa waxbarashada, taakulaynta iyo daryeelidda Carruurta Agoomaha ah, ayaa Dugsigan ka hirgelisay magaalada Burco, ayaa sidoo kale, goobo waxbarasho oo kan la mid ah ka hirgelisay magaalooyinka Boorama iyo Hargeysa, sidoo kalena adeegyo taakulo ah ka fulisay guud ahaan gobollada Somaliland sannadihii u dambeeyey.
Previous: Xukuumadda Somaliland oo Sheegtay in Taariikhda Qaranka lagu Darayo Go’aankii uu Shacabka Hargeysa ku badbaadiyey Duuliye Axmed-dheere
Next: Shirka 7aad ee Golaha Dhexe ee Xisbiga KULMIYE oo Qabsoomay iyo Go’aamada ka soo Baxay